नेपाली साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको २०८ औँ जन्मजयन्ती आज देश तथा विदेशका विभिन्न स्थानमा समेत विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ ।
पृथ्वीनारायण शाहले भौगोलिकरूपमा एकीकरण गरेको नेपाललाई आदिकवि भानुभक्तले भाषा, साहित्य र संस्कृतिमार्फत् भाषिक एकीकरण गरेका हुन् ।
भानुभक्तका पिताको नामचाहिँ धनञ्जय आचार्य हो । उनकी माताको नाम धर्मावतीदेवी हो । उनले आफ्ना हजुरबा श्रीकृष्ण आचार्यबाट शिक्षा पाएका थिए ।
भानुभक्त आचार्य अहिले हामीसामु छैनन् । उनको १९२५ साल असोज ६ गते सेतीघाट तनहूँमा मृत्यु भएको हो । उनी मरेर गए पनि उनले लेखेका कृतिहरू अझै पनि हामीसँग छन् ।
भानुभक्तको जन्मजयन्ती भारतको दार्जिलिङ, सिक्किमलगायत नेपाली भाषा भाषी धेरै रहेका स्थानमा पनि मनाइन्छ ।
चर्चित छन्द कवियत्री सरू गुरागाईँको सुमधुर स्वरमा भानुभक्तिय रामायण सुन्नलाई यहाँ क्लिक गर्नुस
नेपाली भाषाको अध्यन, अनुसन्धान अनि विकासनै भानुप्रतीको सच्चा श्रद्धासुमन हुनेछ ।
आदिकवि भानुभक्तको सङ्क्षिप्त जीवनी -नरेन्द्रराज प्रसाई
मोतीराम भट्टले १९४८ सालमा भानुभक्त आचार्यलाई आदिकवि लेखे, तर उनले लेखेको त्यो ‘आदिकवि’ त्यतिसारो चलेन । १९९७ सालमा जुद्धशमशेर राणाले ‘भानुभक्तलाई आदिकवि भने पनि हुन्छ’ भन्ने हुकुम दिएपछि मात्र तमामको जिभ्रोमा भानुभक्त आदिकवि हुन थाले । अनि सूर्यविक्रम ज्ञवालीले भानुभक्तबारे मोतीराम भट्टले पूरा गर्न नसकेका प्रायः धेरै काम गरे ।
कविता लामा, नरेन्द्रराज प्रसाई, रजनी ढकाल, वासुदेव त्रिपाठी, इन्दिरा प्रसाई, राजेन्द्र सुवेदी, महादेव अवस्ठीआदि समेत भानुभक्तको कीर्ति र कृति फैलाउन मन, वचन र कर्मले समर्पित भएर जुटे । भवानी घिमिरेले पनि उनका बारे बृहत् विशेषाङ्क निकाले । यादव खरेलले भानुभक्तको जीवनीमा आधारित कथानक चलचित्र नै बनाए । म्युजिक नेपालले रामायणका सातकाण्डकै गीतिसीडी प्रकाशमा ल्यायो । त्यसपछि भानुभक्त झनै चहकिलो रूपमा प्रस्तुत हुँदै आए ।
मोतीराम भट्टले भानुभक्त आचार्यको जन्म १८६९ साल लेखे । अनि त्यस मितिलाई सच्याएर भानुभक्तकी नातिनी विष्णुमायादेवीले १८७१ साल असार २९ गते भानुभक्त जन्मेको ठोकुवा गरेर १९९८ सालमा “भानुभक्त मणिमाला” नाउँको किताप निकालिन् । त्यस कितापमा भानुभक्तले नै बनाएको जन्मकुण्डली र जन्मकुण्डली उपर उनैले लेखेको श्लोक भनेर पनि पेस गरियो । तर उक्त श्लोक र कुण्डली भानुभक्तबाट नै तयार भएको भन्नेबारे कुनै प्रमाण देखिदैन । वास्तवमा कुनै पनि ब्राम्हणको निधनसँगै जन्मकुण्डली चितामा जलाउने हिन्दू परम्परा नै छ । त्यसमाथि भानुभक्त त पण्डित नै थिए । त्यतिमात्र होइन उनको जन्मकुण्डली जोगाएर राख्नु पर्ने कुनै कारण नै थिएन । अनि त्यतिखेर उनी आदिकवि पनि थिएनन् । तर उनको निधनको ७३ बर्ष पछाडि भानु जन्मकुण्डली प्रकाशित हुनुको अर्थ के हो ? मोतीराम पछाडिका लेखकले भानुजीवनी लेख्ने क्रममा यस्ता अनेक नाटकीय दस्तावेज प्रस्तुत गर्दै आए । नरनाथ आचार्यले पनि मोतीरामलाई खसाल्ने काम नै गरेको देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन विष्णुमायादेवीबाट प्रस्तुत भएको भानुभक्तको जन्म श्लोक र जन्म कुण्डली सहितका प्राय: धेरै दफामा उनले पनि आफ्नो बुढी औठा थिचे । त्यसपछि प्राय: अरुहरु आचार्य पनि धुरिएर विष्णुमाया र नरनाथकै साक्षीमा नै मौजुद देखिए । वास्तवमा त्यस बेहोराले भानुभक्तबारेका तथ्यहरु कुन ठीक र कुन बेठीक भनेर छुट्याउन गाह्रो पर्न थाल्यो । कतिसम्मभने आचार्य खलकबाट नै भानुभक्तका कवितामा समेत पाठभेद हुन थाल्यो। अन्तत: नेपाल सरकारबाट भानुभक्त आचार्य द्विशतवार्षिकी कार्यक्रममार्फत नरेन्द्रराज प्रसाईकृत “भानुभक्त आचार्यको जीवनवृत्त” नामक जीवनीकृति प्रकाशित भएपछि थुप्रै जिज्ञासाको सावधान हुन थाल्यो ।
भानुलाई शिरमा बोकेर नै मोती पनि चम्किए । वास्तवमा मोतीरामले भानुभक्तलाई उकास्न पहरा फोरे । भानुभक्तलाई अमर पार्न उनले भानुभक्तको जीवनी लेखेर त्यसलाई जनमन छुने अनेक कला झिके। नेपाली जनजीवनमा साहित्यिक र भाषिक जागरण ल्याउनका लागि मोतीरामले घुँडा टेकेर भानुभक्तलाई उठाए । मोतीरामले नेपाली भाषासाहित्यलाई रातोरात उन्नतिको शिखरमा पुर्‍याउने हेतु भानुभक्त आचार्यको यथेष्ट कदर गरे । त्यसैले उनले भानुभक्तलाई आफ्नो. चरित्र नायकका रूपमा काँधमा बोके । वास्तवमा भानुभक्तलाई नेपाली भाषासाहित्यको शिरताज बनाउन मोतीराम एक्लैले कठोर प्रयत्न गरे । तर भानुभक्तकी नातिनी विष्णुमायादेवीबाटै मोतीरामलाई छोप्ने षड्यन्त्रको सुरुवात हुन थाल्यो । अनि त्यस कलामा आबद्ध हुन अरु आचार्यहरु पनि त्यति चुकेका देखिएनन् । विष्णुमायादेवीको कृति “भानुभक्त मणिमाला”मा त मोतीरामको ‘मो’ पनि उच्चारण गरिएको पाइदैन ।
“नरेन्द्रराज प्रसाईद्वारा लिखित ‘भानुभक्त आचार्यको जीवनवृत्त’ नामक जीवनीकृतिका अनेक वैशिष्टयमध्येको एक मुख्य वैशिष्टय मोतीराम भट्टले १९४८ सालमा प्रकाशित गरेको ‘कवि भानुभक्तको जीवनचरित्र’को झन्डै सवा सय वर्षको समयपछि प्रस्तुत हुन आएको अर्को सृजनात्मक भानुजीवनी कृति हुनाको गौरवी पहिचान पनि हुँदै हो । जहाँ मोतीरामकृत भानुजीवनी भानुबारेको प्रथम जीवनीकृति थियो त्यहीँ नरेन्द्रराज प्रसाईकृत यो भानुजीवनी अद्यावधिक मानक भानुजीवनी हुन पुगेको छ । प्रा.डा.वासुदेव त्रिपाठी, महासमालोचक”
भानुभक्तका रचनाहरू नेपाली भाषामा अग्रणी रूपमा रहेका छन् । उनले आफ्नो वैयक्तिक प्रतिभाका कारणले नै रामायण लेखे । ‘अध्यात्म रामायण’ अनुवाद भएर पनि यस कृतिलाई भानुभक्तले मौलिक रूपमा प्रस्तुत गरे । भानुभक्तअघिका नेपाली कविले नेपाली भाषासाहित्यलाई यति सहज, सरल र मौलिक रूपबाट प्रस्तुत गर्न सकेका थिएनन् । त्यसैले भानुभक्तकृत “रामायण”लाई नै नेपाली भाषासाहित्यको पहिलो महाकाव्य भनियो ।
भानुभक्त आचार्यले जीवनमृत्युसँग जुधेर पनि आफ्ना हितकारी धर्मदत्त सुब्बाको आग्रहमा रामायण उत्तर काण्डको ‘रामगीता’को नेपाली भाषामा अनुवाद गरे । वास्तवमा त्यस बेला उनी कालज्वरले मरणासन्न भएका थिए । तर पनि उनले आफ्ना छोरा रमानाथलाई ‘रामगीता’ टिपाएर नै छाडे । अन्ततः त्यस कृतिको निर्माणपछि अर्थात् १९२५ साल असोज ६ गते भानुभक्तले आफ्ना भौतिक आँखा चिम्ले।
साभार – बरिष्ठ साहित्यकार नरेन्द्रराज प्रसाईको फेसबुकबाट